Maalinta: Ogast 22, 2018
'Isbeddel Shaxda' waxaa laga soo qaatay Metro Istanbul
Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Caasimadda ah ee Istambuul Metro Istanbul Metro ayaa soo warinaysa in “Astaanta 'M' loo isticmaalay inay matalaan tareenka dhulka hoostiisa ayaa la beddali doonaa malaayiin kharashna lagu bixin doonaa isbadalkan. Waxaa lagu qoray bogga rasmiga ah ee Metro Istanbul [More ...]
Qadka tareenka xawaare sare leh, oo isku xiri doona Ankara iyo Izmir midba midka kale, wuxuu yareyn doonaa xNUMX saacaddiiba saacadaha 14 tareenka. Muwaadiniintu waxay isweydiinayaan goorta tareenka xawaare sare ee Izmir-Ankara uu furi doono. Hagaag, Izmir [More ...]
Shilalka wadooyinka ee Chorlu ha la daboolin
Shilalka tareenka ee Çorlu wuxuu daboolay shakhsiyaad mas'uul ah: Tekirdağ Çorlu 25 dadka ku naf waayey shilka tareenka, ehelada Evrensel'den Tuncay SAĞIROĞLU'na ayaa hadlay. Tareenka 8 ee ka dhacay degmada Çorlu ee Tekirdağ bishii Luulyo [More ...]
Sofia Metro ayaa lagu dhaleeceeyay isku mid ahaanshaha sumadda sumadda 'Metro Istanbul's logo' cusub oo la bilaabay in la isticmaalo. Marka lagu daro sumadda, calaamadaha metrooga ee Istanbul sidoo kale way isbadali doonaan. Isbeddelkaan ayaa ku kici doona ugu dhawaan 6 milyan TL. 2016 [More ...]
185 Thousand Square Meter Lock Flooring oo ku yaal Degmada Manisa ee magaalada Köprübaşı
Ka dib markii Manisa noqotay aagga magaalada, aagagga dejinta ayaa ka soo noqday tuulada oo ku soo noqday xaafaddii. Dib-u-dhiska xaafadaha, jidadka xabaalaha, hoolka arooska iyo aroosyada muhiimka ah ee wadooyinka badan [More ...]
Maanta taariikhda: 22 Agoosto 1951 Adapazarı Railway
Maanta taariikhda 22 Agoosto 1951 Adapazarı waxaa la furay.